Waxyaabaha aan la arki karin ayaa muuqda, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Sanadkii la soo dhaafay waxaa lagu qabtay carwo sawir-qaadis ah Maddaarka Dulles oo si gaar ah loogu talagalay in lagu soo bandhigo unugyo 50.000 jeer la weyneeyo. Sawirada gidaarka ayaa muujinaya, iyagoo ka bilaabaya timaha shaqsiyeed ee ku jira dhegta gudaheeda, kuwaas oo muhiim ugu ah dareenka isu-dheellitirka, qaybaha shaqsiyadeed ee aagga maskaxda, halkaasoo astaamaha lagu helo. Bandhiggu wuxuu soosaaray aragti naadir ah oo qurux badan adduun aan la arki karin oo i xasuusiyay qayb muhiim ah oo nolosheena Masiixiyiinta ah: iimaanka.
Waxaan warqadda ugu aqrinay Cibraaniyada in aaminaadu ay tahay kalsooni adag waxa la rajeynayo, aaminaad dhab ah oo aan muuqan (Schlachter 2000). Sida sawirradaas oo kale, iimaanku wuxuu muujinayaa jawaab-celinteena xaalad dhab ah oo aan si fudud looga ogaan karin shanteenna dareen. Aaminaadda in Ilaah jiro waxay ka timaadaa maqalka iyo, iyadoo la kaashanayo Ruuxa Quduuska ah, waxay noqotaa rumeeyn adag. Waxaan maqalno oo ku saabsan dabeecadda iyo dabeecadda Ilaah, ee lagu arki karo Ciise Masiix, waxay noo horseedda inaan aaminno isaga iyo ballanqaadyadiisa, xitaa haddii fulintooda oo dhammi weli la sugayo. Ku-kalsoonida Ilaah iyo eraygiisa ayaa jacaylka isaga loo muujinayaa si muuqata oo muuqata. Waxaan si wada jir ah u noqon karnaa rajada ah in aan haysanno xukunka Ilaah, oo aan wanaagga oo dhan wanaag uga guuleysan doonno, kuwaas oo tirtiraya oohinta oo dhanna wax uun hagaajin doona.
Dhanka kale, waa inaan ogaano in maalin uun jilib walba uu sujuudi doono, carrab walbana uu qirayo inuu ciise yahay Sayid, dhanka kale waxaan ognahay in waqtigu uusan wali imaan. Midkeenna weligiis ma arkin boqortooyada Ilaah ee soo socota. Sidaa darteed, Ilaah wuxuu inaga rajeynayaa inaan sii wadno iimaanka xilliga kala guurka ee haray: iimaanka ama aaminaada ballamihiisa, wanaaggiisa, xaqdiisa, iyo jacaylkiisa uu innaga u qabo sida carruurtiisa. Rumaysad ayaynu ku adeecnaa oo iimaan ayaan ka dhigi karnaa boqortooyada Ilaah aan la arki karin.
Iyada oo aan aaminsanaano ballanqaadyada Ilaah iyo inagoo ku dabbakhineyna waxbaristii Masiixiyiinta adoo adeegsanaya nimcada iyo xoogga Ruuxa Quduuska ah, waxaan ku siin karnaa marag nool oo ku saabsan xukunka soo socda ee Ilaah ee halkan iyo hadda, si fudud iyada oo loo maro falalkayaga, khudbadahayaga iyo sidaas sida aan u jeclaano dadka kale ee aadanaha ah.